Golaha ammaanka oo kulan ka yeelan doona Jerusalaam - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Barxadda dibadda ee hayadda caalamiga QM iyo calammada xubanah hayadda. sawir: Adam Rountree
Golaha ammaanka oo kulan ka yeelan doona Jerusalaam
La daabacay torsdag 7 december 2017 kl 08.42
Golaha ammaanka ee hayadda caalamiga ee Qarammada Midoobey (QM) ayaa maalinta jimcada ee berito isugu iman doona kulan degdeg ah, kulankaasina oo ey ka dambeeyeen waddammo uu ka mid yahay dalka Sweden.
Siddeed waddan oo uu ka mid yahay dalka Sweden ayaa ugu baaqay hayadda caalamiga QM in golaheeda ammaanka la isugu yeerto kulan degdeg ah, midkaasina oo ka dambeeyay aqoonsigii dawladda Mareeykanku ku dhawaaqday maqaamka magaalada Jerusalaam (Qudus).
Waddammada kale ee codsiga la gudbiyey Sweden ayaa kala ah: Boliifiya, Masar, Faransiiska, Itaaliya, Sinigaal, Boqortooyada Ingiriiska iyo Uruguwaay.
Dawladda Jabaan oo iminka gacanta ku haysa hoggaanka hayadda amniga QM ayaa dabadeed ku dhawaaqday in kulan la isugu iman doono.
Kulanka degdegga ah ee uu yeelan doono golaha ammaanka ee QM ayaa la isugu iman doonaa gelinka dambe ee jimcada berito saacadda Sweden, iyada oo sidoo kale looga xaajoon doono arrimmo ka bax-san aqoonsiga dawladda Mareeykanka ee maqaamka magaalada Jerusalaam (Qudus).
Siddeeda waddan ee lahaa dalabka kulanka ayaa ka codsaday inuu kulanka uu isugu iman doono golaha ammaanka ee QM jimacada uu u furo António Guterres, ahna hoggaamiyaha hayadda caalamiga ee QM. Guterres ayaa sheegay inuu aamin-san yahay iney tahay labada waddan ee Israa’iil iyo Falastiin iney heshiis ka gaaraan maqaamka magaalada Jerusalaam (Qudus), isagoona intaa raaciyay in aanu jirin xal aan ahayn laba waddan oo deris ah oo nabad ku wada nool.